မြန်မာနိုင်ငံသွားနှင့်ခံတွင်းဆိုင်ရာဆေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များအားတွေ့ဆုံပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
အီလက်ထရွန်နစ်ကျန်းမာရေးသတင်းစနစ်အသုံးပြုခြင်းအသိပေးရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
ဇီဝိတဒါနသံဃာ့ဆေးရုံကြီး (ရန်ကုန်)၊ ကျောက်ကပ်သွေးသန့်စင်ကုဌာန ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး မြွက်ကြားသည့်မိန့်ခွန်းကောက်နုတ်ချက်
လူငယ်မူဝါဒ ရေးဆွဲရေးဆိုင်ရာ ဗဟိုကော်မတီ၊ လုပ်ငန်းကော်မတီနှင့် မူကြမ်းရေးဆွဲရေး အဖွဲ့တို့၏ ဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားခဲ့သည့်မိန့်ခွန်း ကောက်နုတ်ချက်
National Health Plan (2017-2021) Dissemination Meeting Opening remarks by Union Minister for Health and Sports, Dr. Myint Htwe
၂၀၁၆ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ခုခံအားကျဆင်းမှု ကူးစက်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးနေ့ (ဗဟိုအဆင့်) အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး မြွက်ကြားခဲ့သည့် မိန့်ခွန်းကောက်နုတ်ချက်
9th Global Conference on Health Promotion: Shanghai 21-24 November 2016, Fifteen-minute talk given by Dr Myint Htwe, Union Minister for Health and Sports, Myanmar.
Opening Remarks by H.E. Dr. Myint Htwe, Union Minister, Ministry of Health and Sports, Myanmar at the MMA Symposium "Know Your Epidemic to End TB in Myanmar"
Opening Remarks by H.E Dr. Myint Htwe, Union Minister, Ministry of Health and Sports, Myanmar at the 4th SEARAME Conference, 2016
Opening Remarks by H.E. Dr. Myint Htwe, Union Minister, Ministry of Health and Sports, Myanmar at the MoHS Key Stakeholders Meeting
Opening Remarks by H.E. Dr. Myint Htwe, Union Minister, Ministry of Health and Sports, Myanmar at the Launching Ceremony for formulation of National Health Plan (2016-2021)
Opening Remarks by H.E. Dr. Myint Htwe, Union Minister, Ministry of Health and Sports, Myanmar at the 4th Myanmar Mental Health Conference
မိခင်သေဆုံးမှုစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ခြင်းစနစ် စတင်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် အသိပေးဆွေးနွေးပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စု၀န်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး ပြောကြားခဲ့သည့်မိန့်ခွန်း ကောက်နုတ်ချက်
မြန်မာနိုင်ငံဆေးပညာရှင်အဖွဲ့၏ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ နှစ်ပတ်လည် မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေး ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ပြောကြားသည့် မိန့်ခွန်း
Draft Outline of the Five-minute talk on UHC in the context of elderly care. Kobe, Japan. (13-9-2016)
Minister's Opening Remarks on "Collective Voices: Exploring the barriers to healthcare access in Myanmar" (8-9-2016)
Minister's Opening Remarks on "MOHS-WHO Program Managers Meeting" (2-9-2016)
ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အထက်မြန်မာပြည်)တွင် ဖွင့်လှစ်သည့် အရာထမ်းလောင်းအခြေခံ(အထူး) သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၃)၊ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စု၀န်ကြီး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် ကျင်းပသော Seminar on the significance of health for development in Myanmar ၌ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး မြွက်ကြားသည့်မိန့်ခွန်း
မြန်မာနိုင်ငံ ကြက်ခြေနီအသင်း (၇၇)ကြိမ်မြောက် ဗဟိုကောင်စီအစည်းအဝေးနှင့် ဒွါဒဿမအကြိမ်မြောက် မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီညီလာခံတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
Opening speech by Dr. Myint Htwe , Union Minister for Health and Sports, at the opening ceremony of the“2016 Asian Men’s Club Volleyball Championship”, Wunna Theikdi Indoor Stadium Nay Pyi Taw, Myanmar ( 23rdAugust2016)
Minister's Opening Remarks on "DHPRDM Director General and University Rectors Meeting" (18-8-2016)
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ထမ်းများလုပ်ငန်းခွင်ကျွမ်းကျင်သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁/၂၀၁၆) ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးမြွတ်ကြားသည့် အဖွင့်မိန့်ခွန်း
ကမ္ဘာ့မိခင်နို့တိုက်ကျွေးရေး ရက်သတ္တပတ်နှင့် အာဟာရဖွံ့ဖြိုးရေး ရက်သတ္တပတ်များ ဗဟိုအဆင့် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား (၂၀၁၆) တွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ပြောကြားသည့် အဖွင့်မိန့်ခွန်း
၃-၈-၂၀၁၆ ရက်နေ့မှ ၅-၈-၂၀၁၆ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမြွက်ကြားခဲ့သည့် အပိတ်မိန့်ခွန်းကောက်နုတ်ချက်
၃-၈-၂၀၁၆ ရက်နေ့မှ ၅-၈-၂၀၁၆ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး မြွက်ကြားခဲ့သည့်အဖွင့်မိန့်ခွန်း ကောက်နုတ်ချက်
Opening Speech by Dr Myint Htwe, Union Minister for Health & Sports AFF Myanmar Futsal Club Championship 2016
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဒေါက်တာမြင့်ထွေးမှ နိုင်ငံတစ်ဝန်း ပုံမှန်ကာကွယ်ဆေးထိုးလုပ်ငန်းတွင် ပြင်းထန်အဆုတ်ရောင်ရောဂါပိုးကာကွယ်ဆေး (PCV) စတင်ထည့်သွင်းထိုးနှံခြင်း အခမ်းအနားတွင် ပြောကြားသည့်အဖွင့် မိန့်ခွန်း
မွေးဖွားမှုနှင့်သေဆုံးမှု မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစာရင်းဇယားများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
ပုံမှန်ကာကွယ်ဆေးထိုးအစီအစဉ်တွင် ကာကွယ်ဆေးအသစ် ပြင်းထန်အဆုတ်ရောင်ရောဂါပိုး ကာကွယ်ဆေး (PCV) ထည့်သွင်းထိုးနှံခြင်း ဗဟိုအဆင့်အသိပေးဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး မြွက်ကြားသည့်မိန့်ခွန်း
ကမ္ဘာ့သွေးလှူရှင်များနေ့ အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စု၀န်ကြီးမှ မြွက်ကြားသည့်မိန့်ခွန်း
Round Table Forum on the ASEAN Experience of Cities/Areas Getting to Zeros: Side meeting during the United Nation High Level meeting on Ending AIDS (8-6-2016)
Statement of H.E. Dr. Myint Htwe, Union Minister for Health and Sports, Head of the Delegation of the Republic of the Union of Myanmar at the High-level Meeting of the General Assembly on HIV/AIDS
National Statement of H.E. Dr. Myint Htwe, Union Minister for Health, Republic of the Union of Myanmar at United National Special Session of the General Assembly on the World Drag Problem, 21 April 2016 A Side Event of UNGASS 2016
National Statement by His Excellency Dr. Myint Htwe, Union Minister for Health, Republic of the Union of Myanmar. A Side Event of UNGASS 2016
Inaugural speech delivered by the Union Minister Dr Myint Htwe to health professionals of the Ministry of Health and officials of the Department of Sports and Physical Education (1-4-2016)
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးက ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန ဝန်ထမ်းများသို့ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း (၁-၄-၂၀၁၆)